Toro-hevitra tsotra ho an'ireo izay te-hijery ny Aterineto. - Ny aterineto club 'fitiavana Mamiratra'
Toro-hevitra tsotra ho an’ireo izay te-hijery ny Aterineto. — Ny aterineto club ‘fitiavana Mamiratra’
Internet Mampiaraka dia manome antsika fahafahana mba hihaona amin’ny olona tsara, fa ny sasany mitaky fahaiza-manao. Rehefa fivoriana manan-danja ny tsipiriany madinika indrindra ary rehefa mahafehy izany fahaiza-manao, dia afaka manomboka ny fikarohana ny mpiara-miasa mety. Eto dia ny zava-mahaliana izay mety hanampy anao hanatsara ny fahaiza-manao rehefa fivoriana sy ny filalaovana fitia.
Mpivady matetika miandry ny daty vitsivitsy alohan’ny hanombohanao fomba ofisialy ny Mampiaraka.
Ny olona mitsipaka mitabataba ny vehivavy
Raha toa ny vehivavy iray te-hahalala izy, dia tokony miala amin’ny feo mahery ny vondrona mba hanome ny olona ny fahafahana hanatonana azy.
Raha te-hamorona ny indray mipi-maso fifandraisana amin’ny olona nandritra ny resaka miteny ny anarany, fara fahakeliny, indroa.
Izany dia mampiseho ny saina sy ny fahaizany manao fifandraisana
Asehon’ny fanadihadiana fa, tsianjery isan-karazany ny tsipiriany momba ny olona sy manamarika azy amin’ny resaka, tsy ianao ihany no handoka hafa, fa mampiseho ihany koa ny tombontsoa.
Rahoviana no fotoana tsara indrindra ny antso taorian’ny daty voalohany. Manam-pahaizana manokana ny hevitra tsy mitovy, fa ny tsara indrindra ny fotoana dia ny fotoana ny roa andro, fa tsy mihoatra ny herinandro.
Raha miantso loatra tany am-boalohany, dia toa somary mafy
Ny ankamaroan’ny olona tsy mitovy hevitra, rehefa afaka telo volana ny Fiarahana.
Ny vehivavy izay mametraka ny sary eo amin’ny toerana Fiarahana mandray indroa kokoa hafatra noho ireo izay tsy.
Maimaim-poana ny Mampiaraka toerana nandritra ny folo isan-jato ny vaovao ny kaonty isan ‘ cheaters izay mianatra noho ny vola.
Manodidina ny iray fahatelo ireo izay nihaona tao amin’ny Aterineto, mamorona ny fifandraisana, ny iray hafa fahatelo aza, ny hafa kosa dia handao ny hevitra.
Asehon’ny fanadihadiana fa ny olona dia avo roa heny ny fahombiazana dia nahalala ny alalan ‘ ny namana sy ny fianakaviana noho izy ireo raha nandeha tany an-tany bar eo akaiky eo.
Araka ny fanadihadiana dia fantatra tsara Mampiaraka toerana, ny antsasak’ireo namaly no heverina ho manan-danja indrindra ny aina vaovao ho an’ny dimy ambin’ny folo isan-jato nanana ny lanjany hariva akanjo nandritra ny folo — mahafinaritra ny fofon’ny ditin-kazo manitra na Cologne, ny folo isan-jato no tsara tarehy ny hoditra, sy ho fito tsara tarehy volony.
Ny antsasaky ny olona hatoky tena rehefa fivoriana ny vehivavy no ho an’ny fotoana voalohany.
Ny fanadihadiana natao dia mampiseho fa ny sekoly, ny Oniversite, na ny trano fisakafoanana sy toeram-pivarotana dia toerana tsara indrindra mba manadala ankizilahy satria ny olona dia misokatra kokoa ny fihaonana amin’ny hafa ao amin’ny ireo toerana. Ny ratsy indrindra ny toerana misy ny trano fisakafoanana sy ny trano fijerena sinema.
Araka ny fikarohana, ny fomba ny olona mijoro (izay slouching na tsia) zava-dehibe eo amin’ny valopolo isan-jato ny toe-javatra ao amin’ny fanomanana ny fahatsapana voalohany ny vehivavy.
Mamerina ny fihetsika ny interlocutor, ianao am-pilaminana maneho ny liana.
Na izany aza, tandremo tsara mba tsy hamerina isaky ny hetsika
Ho an’ny vehivavy ny tena maharikoriko toetra ao amin’ny olona dia refin, nisavoritaka ny fantsika, flatulence sy belching, tsy hita nify, tena ankasitrahana na ny fofonaina ary ny «adala» hevitra.
Raha misy olona miezaka ny hifandray amin’ny vehivavy iray, izy no nanorina ny tapany voalohany fahatsapana azy eo ny tarehy sy vatana, ny fiteny, ny efa-polo isan-jato eo amin’ny fomba miteny ary fito monja no isan-jato amin’ny inona izy, raha ny marina hoy izy.
Raha toa ny vehivavy iray dia liana amin’ny olona, dia ho tsiky na mihomehy ny vazivazy, milalao amin’ny volo, mikasika ny tanana zavatra sasany, toy ny amin’ny fitaratra, mena, raha misy olona miresaka ny fiderana natavezina, na mahakasika ny molotra, mba hisalasala na manenjana ny manoloana ny olona.
Ny famantarana fa ny vehivavy dia tsy liana amin’ny lehilahy iray dia ahitana: fisorohana ny masony, sandoka tsiky na ny tsy fisian’ny tsiky, ny fahadisoan-dàlana avy amin’ny interlocutor, monosyllabic valiny, niondrika ny fihetsika, matetika maso ny famantaranandro, tapping ny tongony ary tsy miraharaha jerena.
Vehivavy tsara tarehy mahazo fomba fijery hafa, winks sy ny fanenjehana, fa azy ireo sy ny tsy antonona ny olona rehefa very fahatokisana amin’ny vehivavy ireo.
Fikarohana dia mampiseho fa ny olona dia mahafantatra fa izy ireo raiki-pitia rehefa afaka telo daty, ary ny vehivavy latsaka ihany rehefa ny fahadimy ambin ‘ ny folo daty.
Eo ho eo, mitranga manomboka nanoroka ny daty faharoa, ary manana firaisana ara-nofo rehefa afaka dimy daty.
Ny olona dia sarotra ny miresaka, raha misy dia misy ny vehivavy roa satria izy dia tsy te vehivavy iray hafa nahatsapa efitra. Noho izany, raha toa ny vehivavy iray te-hisarika ny olona, dia tokony hitondra ny namany roa.
Vehivavy iray afaka hampitombo ny vintana fa ny fitoriana ny olona, raha toa ka hanitsy namakivaky ny tanana, dia mizara ny indray mipi-maso sy tsiky.
Karazana dimy ny vehivavy fa ny lehilahy miezaka ny tsy: maharitra zioga, ireo izay manomboka loatra vao mba manomboka miresaka momba ny fanambadiana, dia tia miala voly, masy sy panickers miahiahy ny na inona na inona.
Ny efatra fahita indrindra fahadisoana amin’ny daty dia ahitana: ny tara, be loatra miresaka momba ny tenako be loatra ny tsipiriany momba ny lasa ny fifandraisana ary be zotom-po.
Ny lehilahy no tena matahotra fa ny vehivavy dia tonga teo aminy sy ny namany dia tsy mamela azy mandany ny fotoana malalaka lasa Intrusive, dia tsy ho hajaina sy ny mitaky lalandava ny saina.
Ny olona toy ny zava-miafina sy ny «fanenjehana», noho izany dia tsy ilaina loatra ho hita ao ny daty. Matihanina ny Fiarahana matetika soso-kevitra ny tsy ho maika loatra mba hitsambikina ho any am-pandriana ny iray hafa, toy ny ela ny fikatsahana, ny kokoa ny fitiavana dia hamony.
Ny fianarana dia toa manondro fa ny fahasambarana dia areti-mifindra, sy ny mety ho mpiara-miasa tsy mahazo miala sambatra ny olona
← Ny fonja: eny, sehatra ho an'ny fifandraisana akaiky sy ny fivoriana tsy misy fanaraha-maso ny